အစာတောင့်စက်ကိုအစာကျွေး။ ကြိတ်ခွဲသောဗီဒီယိုကိုကျွေးပါ --Victor Pellet Mill
VTKLP စီးရီးတိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်စက်သည်ပြောင်းဖြင့်အစာကျွေးနိုင်သည်,ဂျုံ ,ဆန်, ပြောင်းဖူးကောက်ရိုး, မြေပဲခွံ, ဆန်ခွံ, ကဗျာ, ဝါဂွမ်းအမျိုးအနွယ်ကိုထည်, ဂျုံ - ကောက်ရိုး, နေကြာစေ့အခွံ,cotton stal……...
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် & Fish Pellet Making Machine Application Our fish pellet making machine is perfect for the production of pellets from grains, မြက်ပင်, စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပရိုတိန်းနှင့်သကာ. ငါတို့…… ...
စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်သစ်သားအကြွင်းအကျန်များကိုအပူနှင့်ချက်ပြုတ်ရန်အတွက်သစ်သားလုံးလေးများအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်သို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အစာတောင့်များပြုလုပ်ရန်ကြက်အစာတောင့်စက်ကို ၀ ယ်ရန်သင့်လျော်သည်။, မင်းရှိရင် ...... ...
ရောစပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအစာပါ ၀ င်သည့်အရာများအားခွဲခြားခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း, လူများသည်အစာ၏ gelatinization နှင့်အစာကြေလွယ်မှုပိုမိုမြင့်မားစေရန် pelleting လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသုံးပြုသည်။.
ငါးအစာကျွေးခြင်းစက်ရုံနောက်ခံ & Necessity Along with the development of aquaculture, ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်ခဲ့သည်, အထူးသဖြင့်ဆက်လက်တိုးတက်၏သီလအတွက် ...... ...
♦ feed crushing if your raw materials are not in powder,သငျသညျအစာကျွေး crusher လိုအပ်ပါတယ်,ပစ္စည်းကိုကြိတ်ခွဲခြင်းသည်ရေတည်ငြိမ်မှုနှင့်အစာတောင့်များ၏အစာချေဖျက်မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇယ်အစာသံတူစက်သည် ...... ...
ပြားချပ်ချပ်အတောင့်ကြိတ်စက်အရွယ်အစားသေးငယ်သည်, အစာကျွေးခြင်းနှင့်သစ်သားလုံးလေးများပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ. ၎င်းသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးသည့်လုံးလေးတစ်လုံးပါသည့်စက်ရုံတစ်ရုံဖြစ်သည် 200 မီလီမီတာအချင်းသေဆုံးလျက်ရှိသည်, သေတွင်းထဲရှိအပေါက်များ…… ...
3 သင့်ကိုယ်ပိုင်ဝက်အစာကျွေးခြင်းအဆင့်များ 1. သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အစာကျွေးလုံးလေးများလုပ်မယ့်အခါ, ပထမအဆင့်မှာသင်၏ကုန်ကြမ်းများ၏အစိုဓာတ်ကိုသေချာစေရန်ဖြစ်သည် 10-12%. အဆိုပါစိုစွတ်သောသို့မဟုတ်ခြောက်စက်မီတာ ...... ...